Qarax Ismiidaamin ah Oo Saaka Lagu Weeraray Hotelka Saxafi Ee Magaalada Muqdisho | Saxil News Network
Qarax Ismiidaamin ah Oo Saaka Lagu Weeraray Hotelka Saxafi Ee Magaalada Muqdisho
Muqdisho (SAXILNEWS)_Wararka saaka magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xilligii Salaadda Subax lagasoo baxay kadib waxaa inta badan Magaalada muqdisho laga maqlay qarax aad u xoogan, oo la soo sheegayo in uu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu weeraray Hotel Saxafi. Saxafi Hotel waxa uu ku yaallaa agagaaraha Isgoyska KM4, waxa uuna ka soo horjeedaa Xarunta Hay’adda Dembi Baarista CID, iyadoona qaraxa uu burbur ka soo gaaray Dhismaha Hotelka,
Wariye ku sugan Magaalada Muqdisho, ayaa soo sheegaya in shacabka ku dhaqan Bartamaha Caasimadda, ay hurdada kaga baraarugeen daryanka qaraxaasi, oo ahaa mid ruxay Caasimadda. Haweeney degan nawaaxiga Isgoyska KM4, ayaa waxay sheegtay qaraxa ka dib inay maqleen rasaas xoogan, oo u muuqato mid ay is isweydaarsanayan Ciidanka Ilaalada Saxafi Hotel iyo dabley hubeysan, oo weerarkaasi soo qaaday,
Haweeneydan oo codsatay inaanan magaceeda Warbaahinta loo adeegsan, ayaa sidoo kale sheegtay daqiiqado ka dib inay maqleen dhawaaqa gaadiidka gurmadka deg-degga, oo ku wajahan Dhismaha Hotel Saxafi. Sarkaal Nabad Suggida Gobolka Banaadir ka tirsan, ayaa sheegay in gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyay lagu dhuftay albaabka hore ee Saxafi Hotel, inkastoo ay mar soo baxeen in lagu weeraray dhabarka dambe ee Hotelka. Hotelkan, ayaa waxaa degan Saraakiil ciidan, Xildhibaano Baarlamaanka Somaliya ka tirsan, siyaasiyiin iyo qurbo joog, maalmahaanba booqasho ku joogtay Magaalada Muqdisho.